UKATE BUSH: UPHENGULULO LWEALBHAMU YERED SHOES - IINDABA
Ikhathalogu yekhathalogu kaKate Bush, icwecwe lakhe lesixhenxe elivela ku1993 lifumana umzamo wokungafezeki otyhala nzima kakhulu ukufumana umbono wakhe olandelayo.
Kwibali elifutshane likaHans Christian Andersen Izihlangu ezibomvu, umfazi utyibilika kwezinye izihlangu ezibengezelayo kwaye ngequbuliso akanakuyeka ukudanisa. Konke kumnandi de ahambise amangcwaba ezinzulwini zobusuku, othuke ngokwaneleyo ukunyanzela umgwebi ukuba anqumle iinyawo zakhe ezibomvu krwe ngethemba lokophula umlingo. Abenzi bhanyabhanya baseBritane uMichael Powell kunye no-Emeric Pressburger balithathile elo bali balwenza ubugcisa be-meta kunye nomdlalo bhanyabhanya ka-1948 Izihlangu ezibomvu . Ibeka malunga nebhalethi ye-phantasmagoric eguqulela intsomi kaAndersen, kodwa umboniso bhanyabhanya ukwabonisa imeko yangasemva kwinqanaba lomdanisi ophambili. Awunakho ukuba neendlela zombini, umlawuli we-ballet oqaqambileyo uyamxelela. Umdanisi oxhomekeke kwintuthuzelo ethandabuzekayo yothando lomntu akanakuze abe ngumdanisi obalaseleyo. Ekugqibeleni, anyanzelwe ukuba akhethe phakathi kokuthanda okukhulu, ubeka ezinye iiruby slippers elinye ixesha-kwaye utsibe phambi kololiwe ohambahambayo. Izihlangu ezibomvu , kubo bonke ubuhle bayo nentlekele, kwizigqibo zayo ezingenakwenzeka ngokubhekisele kubugcisa kunye nobomi, yenye yeefilimu zikaKate Bush azithandayo. Wabiza i-albhamu yakhe yesixhenxe emva kwayo.
Andikwazi ukuthenga ulonwabo
Xa uBush Izihlangu ezibomvu yakhululwa ngo-Novemba 1993, imvumi eneminyaka engama-35 ubudala yayixengaxenga. Umama wakhe wayepasile kunyaka ophelileyo. Ubudlelwane bakhe bothando kunye nomlingane osondeleyo womculo uDel Palmer, owayemazi ukususela ebutsheni bakhe, wayephela. Kwaye emva kokuchitha ubomi bakhe bonke bomntu omdala ekhulisa ngokuzolileyo umbono wakhe ngokwenyani ngesandi kunye nomfanekiso, wayelumkisiwe kukukhutshwa ngumsebenzi wakhe. Ndiziva ndidiniwe kakhulu, watsho ngeloxesha. Ndiya eholideyini. Ndijonge phambili ekubeni ndingakholisi mntu ngaphandle kwam. Esi yayingesoyongelo olungenamsebenzi. I-albhamu yakhe elandelayo ayizukufika eminye iminyaka eli-12.
Kodwa Izihlangu ezibomvu uye wenza kwakhona yonke into: ukucula nokudanisa, ukubhala kunye nokuvelisa. Ingxelo iboniswe ecaleni kwefilimu emfutshane ebizwa ngokuba yi-45 yemizuzu Umgca, umnqamlezo kunye nejika U-Bush uyalele, wabhala, kwaye wenza inkwenkwezi kuyo. Umgca ayiphuhliswanga kakubi njengoko idibanisa umtya weevidiyo zomculo eziphindaphindayo ngecebo lecockamamie eliphefumlelwe nguPowell Izihlangu ezibomvu kodwa ngaphandle komkhondo wale bhanyabhanya. (Ngo-2005, uBush ngokwakhe wabiza i-chintzy visual umthwalo we-bollocks.)
I-albhamu ihamba ngcono. Ayibekwa phakathi kwezona zintle zikaBush-ivakala ngokungaphaya ngama-80s kunezinye iirekhodi azikhuphileyo ishumi leminyaka, ephawulwe yimigibe emikhulu kunye nesandi esibuhlungu esingaziwa sisilumkiso sakutsha nje. Yinto yangaphandle, kodwa akukho ntlekele. Izihlangu ezibomvu Ufumanisa ukungafezeki kokuzama ukutyhala nzima ukufumana umbono wakhe olandelayo.
Ukungazinzi kwe-albhamu yomculo kusetelwe ngokuchasene nokubhalwa kwengoma kaBush ngokwentelekiso. Izihlangu ezibomvu lelona cwecwe lokuvuma izono ligcisa elingaziwayo, okanye elinomdla wokuvuma izono. U-Bush uhlala esebenzisa ithuba lesithuba esingafumanekiyo phakathi kobugcisa kunye nenyani, enika abalinganiswa, kunqabile ukuba enze udliwanondlebe, uhlala esazi ngokutshiswa kukukhanya okuqhubekayo. Yiyo yonke into yobugcisa-imvakalelo yokuhamba ushiye imida ongenakukwazi ukuyenza, ebomini bokwenyani, utshilo malunga nexesha Izihlangu ezibomvu . Yonke yenza ukukholwa, ngokwenene. I-albhamu iyalahleka xa isilela kobu bumlingo. Xa kuziwa ekubhaleni kwakhe ingoma, amabali kaKate Bush phantse ahlala exakile kunoKate Bush.
Iirekhodi zobuqu zerekhodi zelahleko, unyamezelo, kunye nenkumbulo ziyahlangana kumaXesha amaNandi, enye yeebhalla ezichaphazela kakhulu uBush. Ucula iinkumbulo ezincinci zobomi-ehleka iziqhulo ezingathethiyo, kusihlwa ngekhephu phezulu ngaphezulu kweSixeko saseNew York, isiqwenga sobulumko esivela kunina-njengomqambi otyunjwe ngu-Oscar uMichael Kamen esakha la mathuba athuleyo abe zizikhumbuzo ezinolungelelwaniso lomtya wamaqhawe. U-Bush uphetha le ngoma ngothotho lwee-eulogies: kukadadobawo wakhe, igitare yakhe yexesha elide, iqabane lakhe lokudanisa. Ukuphila nje, kunokuba buhlungu ngokwenene, ubhinqe embindini womzila, echaza okucacileyo ngolweyiseko olunjalo ukuba kuvakala ngathi kuyisityhilelo.
Kodwa ngamanye amaxesha, ukubonakala kwezi ngoma kunye neemvakalelo kunokuziva ziqheleke kakhulu. UBush ubeka izikhalazo ezivakalayo zokukhathazeka kwentliziyo kwaye ke Uthando lunjalo, luxhaswe sisixhobo esinamandla esongeza kuphela ekuqineni; ubukho buka-Eric Clapton -omnye wabadlali beekatala abanamagama amakhulu abatyeleleyo kwelicwecwe- kunye nokukhotha kwakhe oku-blus blues akuncedi. Kufuphi Wena ungomnye ingoma yokwahlukana okungcono, nangona ngokufanayo kwaye uncharacteristically rote. Kuluyolo ukuva umlandeli weentsomi ezama imigca yokumanga ngathi ndiza kuhlala nomhlobo wam / Mmm, ewe, mhle kakhulu, kodwa ixesha lokubaleka lengoma lisondele kwimizuzu emithandathu, ukuphunyezwa okungathandekiyo kweBulgaria Iqela lezwi u-Trio Bulgarka (owayesetyenziselwa ukusebenza ngcono kwi-albhamu yakhe yangaphambili, ngo-1989 Ilizwe leNkcubeko ), kunye nengqumbo engafunekiyo yegitala, ngeli xesha isuka kuJeff Beck, uyijike ibe sisidenge.
Kukho umgangatho weengxowa zokubamba kwi-albhamu, enye ehamba ngokuchasene nokuqonda okungakumbi okubonakalayo komnye wemisebenzi ethandwa kakhulu nguBush, njengo-1985 Iimvumi zothando . Le ndlela yokukhulula, yokusasaza ngakumbi ayihambelani ngokupheleleyo naye. Uyavuma kakhulu kwingoma evulekileyo yokurekhoda, Intombazana eyiRubberband, into ecekeceke apho anqwenela ukuba bhetyebhetye njengomthi, akwazi ukubhabha ajikeleze kwaye abuye umva. Kwaye i-albhamu eyinqaba, i-Big Stripey Lie, i-angsty, i-tunnel wreck evakala ngathi uBush uzama-kwaye ehluleka-ukuthatha izandi zoshishino kunye ne-grunge zakuqala ze-90s. Ingoma iphawulwe okokuqala uBush edlala isiginci kwi-albhamu; ukuxelela, ukuza kuthi ga kulo mhla, ikwakukokokugqibela ukuba adlale ikatala kwi-albhamu. Kwenye indawo, kukho izingqisho zase-Afrika, ii-Celtic stomps, kunye ne-funk enkulu. Ngaphambi kokuba i-albhamu ikhutshwe, uBush wathi Izihlangu ezibomvu ’Indlela ethe kratya yesakhelo sasenzelwe ukuhambelana nokhenketho lwangoku, olwaluza kuba lolokuqala ukusukela ngo-1979.
Ingoma yokugqibela, Kutheni ndifanele ndikuthande ?, ithathe indlela ethe kratya yokugqibezela ethetha ngenkqubo yokungaqiniseki yerekhodi. Ekuqaleni yayikhulelwe nguBush njengokuwina, ukuhamba kancinci kwebhaladi malunga nokungaqondakali kwexesha elizayo kunye nemvakalelo. Kodwa emva koko, ngethemba lokusebenzisana, wathumela iiteyiphu zenguqulo yakhe yakudala kuPrince, owathumela kwakhona i-revamp eyomeleleyo eyathi iinjineli zikaPrince kamva zabiza ngokuba sisiqhulo sediski. Oko kuphele ngo Izihlangu ezibomvu Yindibaniselwano edityanisiweyo yezi zimbini, intsebenziswano phakathi kweengqondo ezimbini eziphambili zeepop ezijike zalithuba elilahlekileyo.
Uluhlu lwama-albhamu e-indie ka-2018
Ngenceba, Bush idemo yengoma ifumene indlela yayo kwi-Intanethi kwiminyaka eyadlulayo, kwaye imvumi yazithabathela yona ukuba inike ukubuyiswa kwakhona kweendlela ezininzi Izihlangu ezibomvu kwiprojekthi yakhe ka-2011 Sika uMlawuli . Olunye uguquko, ubukhulu becala lubonisa ukuba ukubhalwa kwengoma kuninzi lwe Izihlangu ezibomvu ulifanele igama likaBush. Kodwa, kwii-90s zakudala, njengoko wayetsala nzima ukulinganisa intuthuzelo yabantu kunye nokufuna kwakhe ubugcisa, waziphithizelisa izimvo zakhe. Kwiminyaka emalunga nama-26 ukusukela oko Izihlangu ezibomvu uphumile, uBush uphakamise umntwana okuphela kwakhe wakhupha ii-albhamu ezimbini ezizityebi neziphangaleleyo zezinto ezintsha. Ukusuka Izihlangu ezibomvu ’Umzuzu wokungalingani, kusekwe ulungelelwaniso olutsha oluhambelanayo.
Iziqithi ezizayo kwimoya yangokuhlwa
i-albhamu ehamba ephupheni
Ukuvuselelwa kwamanzi acocekileyo kwimveliso yendawo yonke
fm! ukutya okuyinqobo
Uluhlu lwemigraine lwasendle lwasekhaya